﻿	Ntụziaka Stromboli - Ezi Ntụziaka
ndorodoro ite crock na ala
enwere m ike iji ofe ọkụkọ were mee anụ ehi
ole osikapa otu iko osikapa na-emeghị
ihe ị ga-eme na ọka fọdụrụ
Nke a dị mfe Stromboli uzommeputa na-amalite site na pizza refrjiraeto, ma na-ejikwa ihe niile kachasị amasị gị pizza! Salami, pepperoni, ham na ọtụtụ cheese bụ ihe ndị bụ isi dị na ntụ ọka stromboli a dị mfe! Na, ọ dị njikere n'ihe dị ka nkeji 30!
Amaghị m ihe ọ bụla ga-eme ka ezinụlọ ahụ nọ na tebụl ọsọ ọsọ karịa isi nke Pizza mmiri na oven. Stromboli Pizza bụ kpokọtara kpokọtara mgwakota agwa, anụ, na chiiz Oge Italian na-enweta ha oge ọ bụla, enweghị m ike ịsị na m na-eme mkpesa.
Ntụziaka stromboli a dị ngwa ma dịkwa mfe maka ịme ngwa, yana kwa nri abalị. M na-emekarị abụọ (gbanwee ihe ọkụkụ maka iche iche!) N'ihi na nri ndị fọdụrụ zuru oke maka ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ na-arụ ọrụ nri ehihie n'echi ya! Nke ahụ bụ n'ezie mmeri ebe a.
Maka ìgwè mmadụ agụụ na-agụ, ana m agbakwunye otu akụkụ nke Mfe Italian Salad ma ọ bụ Ofe Agbamakwụkwọ Italian (ma ọ bụ mgbe ụfọdụ!).
Otu n'ime ihe kachasị mma gbasara uzommebe stromboli a bụ etu o si dị mfe. Ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka na-enwe mmasị inye aka na kichin, ha nwere ike ịkwadebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro dum na-enweghị enyemaka!
Kedu ihe dị na Stromboli?
Stromboli Efrata dị mfe:
Achịcha Pizza - ejiriwo m pizza mgwakota agwa ebe a iji mee nke a nri abalị nke izu nke dị njikere na 30 nkeji, mana nweere onwe gị ịme nke gị pizza mgwakota agwa ọ bụrụ na ị chọọ!
Achịcha - họrọ nke dị mma masịrị gị, ma hụ na ị ga-ejekwa ozi n'akụkụ ya maka ịmasị ya! Achọrọ m iji ụlọ m mfe marinara ihendori , ma m na-ejikarị ụlọ ahịa echere maka uzommeputa a.
Toppings - Ana m edebe ihe ndị a (yana ezinụlọ-enyi na enyi) na-eji salami, pepperoni, na ham yana ezigbo mkpuchi chiiz mozzarella na Parmesan. Nwere ike ime ihe ọ bụla ịchọrọ maka echiche juputara na stromboli! Gwakọta ihe ma gaa Hawaii, BBQ Chicken ma ọ bụ Chicken alfredo ọ bụrụ na ị na-enwe mmetụta dị egwu.
Otu esi eme Stromboli
Ntụziaka stromboli a dị oke mfe ịme. Naanị:
Kedu ihe dị iche na marinara na tomato ihendori
Bugharịa pizza mgwakota agwa
Tinye cheese na ihe ndozi
Nyefee stromboli n'ime log
Ghichaa akwa akwa
N’oge na-adịghị anya!
Nri Pizza ndị ọzọ sitere n'ike mmụọ nsọ ị ga-ahụ n'anya!
Otu ite Pepperoni Mac na Chiiz Na Bacon - anụ ezi, ezuola kwuru!
Bubble Pizza Bread - onye ọ bụla hụrụ ya n’anya, ụmụaka karịsịa!
Margherita Pizza - kpochapụwo
Pizza achicha griiz - a-ewu ewu na-agụ uzommeputa
Achịcha Cheeseburger Pizza - nri abalị na-atọ ụtọ, n'okpuru 20 nkeji!
Kedu ihe dị iche na Calzone na Stromboli? Gịnị bụ Stromboli?
Won’t gaghị ahụ ọtụtụ ọdịiche dị n’etiti stromboli vs calzone. Isi ihe dị iche bụ nha na ọdịdị.
A calzone bụ nnoo Pizza apịaji na ọkara ma na-abụkarị na ọkara okirikiri udi. A stromboli bụ Pizza a na-atụgharị ma sie, wee bee. Kedu ụzọ ọ bụla, ha abụọ na-atọ ụtọ ma jiri ọtụtụ ihe otu ihe ahụ!
ihe a ga-eri na inine artichoke dip
Nwere ike ịme Stromboli n'abalị ahụ?
Stromboli zuru oke maka prepping n'ihu ma ọ bụ refrigerating ma ọ bụ kefriza!
Kwadebe nke ọma, wee kpuchie ya na plastik na mpempe akwụkwọ na friji ruo awa 12 tupu ị ghee.
Ma ọ bụ kwadebe, ime, oyi, kechie tightly na ifriizi. Iji jee ozi, gbazee maka awa 5-6 na ọnọdụ okpomọkụ, wee kpoo na 350 degrees maka 10-20 nkeji ruo mgbe iwe dị ọkụ.
4.91site na22votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebe10 Nkeji Oge nriiri abụọ Nkeji Oge zuru ezu30 Nkeji Ọrụ12 Mpekere Onye edemedeAshley Fehr Ntụziaka Stromboli a dị mfe na-amalite site na pizza refrjiraeto, ma jupụta ya na pizza kachasị amasị gị! Salami, pepperoni, ham na ọtụtụ cheese bụ ihe ndị bụ isi dị na ntụ ọka stromboli a dị mfe!
▢otu nwere ike friji pizza mgwakota agwa ezu maka Pizza 1
▢1 ½ iko shredded mozzarella cheese ekewa
▢⅓ iko marinara ihendori
▢½ iko osikapa ham gbanwere
▢½ iko salami Mpekere
▢½ iko pepperoni Mpekere
▢otu ngaji mmiri
▢½ ngaji Oge Italian
Ngwurugwu na-ekpo ọkụ na 350 Celsius F ma tinye akwụkwọ mpempe akwụkwọ na akwụkwọ akpụkpọ anụ.
Bugharịa pizza mgwakota agwa si na mmiri na-achaghị ọkụ na ntanetị nke 12 'x 16' (ọ gaghị ezughị oke).
Gbasaa marinara ihendori na pizza mgwakota agwa, ma hapụ otu inch n'ime ụzọ niile na 2-3 'n'akụkụ dị ogologo karịa gị.
Elu na iko 1 nke shredded cheese, ham, salami, na pepperoni. Mechaa na cheese. Cup cheese.
Bugharịa dị ka o kwere mee, na-eme ike gị niile ka ị ghara ịkwanye toppings ka ị na-eme ya. Kwụsị tupu ị rute na njedebe.
Ghichaa akwa, mmiri, nri Italiantali na galik. Ghichaa ntụ ọka pizza ebe ọnụ ya ga-ezute, wee tuo ọnụ.
Tinye na mpempe akwụkwọ ejikere ya na akara ahụ wee hichaa akwa ahụ.
Ime ruo 20-25 nkeji, ruo mgbe aja aja aja na obere puffed. Zuo ike maka oge 5-10 tupu ịkpụ.
Calorisị:Ogbe 203,Carbohydrates:17g,Protein:8g,Abụba:iri na otug,Abụba Ajuju:3g,Cholesterol:33mg,Sodium:Ogbe 553mg,Potassium:87mg,Eriri:otug,Sugar:abụọg,Vitamin A:145IU,Vitamin C:0,5mg,Calcium:Ogbe 79mg,Iron:1.4mg
Isiokwustromboli uzommeputa N'ezieIsi N'ezie Esie ya.TalianEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .